- Ingxenye 3
Intengo yokwakhiwa komgwaqo oshisayo
Inani lokwakhiwa kokumakwa komgwaqo oshisayo luphakathi kuka-28-45, i-oscillation iphakeme kancane cishe ngama-70, kanti intengo yokwakhiwa kokumakwa komgwaqo we-bai eshisayo icishe ibe ngu-67.5. Kunezinhlobo ezintathu zokupenda bokumaka umgwaqo ezisetshenziswa ezweni lami: uhlobo lwe-hot-melt, amanzi-based kanye negumbi le-temperatu ...
Ukugcinwa nokugcinwa komshini wokumaka i-kettle oshisayo
Umshini wokumaka we-Hot-melt autoclave: Ukumaka izingxenye ezimbili ukumaka okuphezulu okuvele eminyakeni yamuva. Ihlukile kokumakwa okushisayo nokuncipha kokushisa okujwayelekile okwenziwa ngezindlela zokomisa ngokomzimba njengokuncipha kwamazinga okushisa noma i-solvent (based-water) volatilization. Tw ...
Ukwethulwa kwamakhono okuphatha ngesandla okuphatha ngesandla kanye nohlelo lokuhlanza okuqukethwe komshini wokumaka
Amakhono okuphatha ngesandla okuphatha umshini wokumaka Ububanzi bokumaka: Ububanzi bamanje bomhlaba jikelele bomshini wokumaka umgwaqo bungu-15 cm, kepha udinga ukucabanga ukuthi umshini wokumaka ungasetshenziswa nasezindaweni zokupaka nasezindaweni zokuhlala. Ngalesi sikhathi, kufanele uthenge ukulungiswa kobubanzi f ...
Uhlobo luni lomshini wokumaka olungele umgwaqo omkhulu?
Hlobo luni lomshini wokumaka olungele ukuvezwa. Ithimba lokwakha elinolwazi liyazi ukuthi ikhwalithi yomshini wokumaka isondelene kakhulu nezici eziningi, njenge: imvelo yomgwaqo, ukumaka ikhwalithi yopende, ikhwalithi yomgwaqo, umoya ngesikhathi sokwakhiwa Umswakama, izinga lokushisa, njll.
Cement ukhonkolo izindlela zokwelashwa ebusweni kanye nezidingo
Izindlela zokwelashwa kwendawo nezidingo zamaphrojekthi kasimende kasimende zihlobene nezidingo zezici zobunjiniyela. Ngakho-ke, imishini namasu wokwakha asetshenzisiwe ahlukile ngokuya ngezidingo zephrojekthi. Inhloso esemqoka yebhuloho emphemeni chiseli ...
Kungani ukumakwa komgwaqo kubalulekile ku-oda lomgwaqo?
Ukumakwa komgwaqo kubalulekile ekugcineni ukuhleleka komgwaqo ngaphandle kokulimala. Lapho umgwaqo ususwa ku-glue, kufanele kube khona ukususwa komaka wangempela womgwaqo. Kubhekisisa ngokuphelele umthelela wezimoto emgwaqeni, lapho iminyango efanele ikhetha ukumakwa komgwaqo kususa ...
Indlela yokuqhekeka yetshizela elinamandla eliphethwe ngesandla
I-chisel enamandla ephethwe ngesandla Indlela yendabuko yokucheba i-chisel ukusebenzisa ithuluzi elibukhali lokushaya ukushaya ukhonkolo nge-piston ukwenza isibopho sikakhonkolo esidala nesisha siqine. Kodwa-ke, indlela yendabuko yokusika inezinkinga ezahlukahlukene, njengokusebenza kahle okuphansi, ...
Imiphumela emine yomshini wokuqopha umshini wokumaka
Ukumaka ukuhlanza isibhamu ukuqhumisa imishini yamabhithi, okusinda kangcono, ukushaywa unhlangothi ukwakhiwa kwendawo okuncane, indlela eqhubekayo yokwenza umgwaqo ophahleni lukasimende, ibhuloho lomgwaqo omkhulu, ibhuloho lakhubeka, futhi umshini wokugaya umgwaqo ekuhlanzeni wokumaka unobubanzi bokugaya ka- 250 -...
Yini okufanele ilungiswe ngaphambi kokuba umshini wokumaka we-CNC usebenze?
Ukusebenza imithetho CNC wokugubha umshini. Hlola ngaphambi kokuhlinzwa. Hlola bese uqinisekisa ukushintshwa kwamandla ngaphambi kokusebenza. Qinisekisa ukuthi ayikho i-short-circuit noma i-short-circuit ukuya phansi phakathi kwamatheminali noma izingxenye ezibukhoma eziveziwe. Ngaphambi kokuvula amandla, konke ukushintsha kusesimweni sokucisha ukuqinisekisa ...